Izinqolobane ZikaGil Ross - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
U-Hank Campbell's Maze weMonsanto-Loving Science Blogs
Posted on December 6, 2018 by UStacy Malkan
Ukuvuselelwa: Lapho le ndatshana isizoshicilelwa, uHank Campbell wasuswa kufayela le- uhlu lwabasebenzi we-American Council on Science and Health, okuyinhlangano ayihole njengomengameli kusukela ngoJulayi 2015, ngezizathu ezingaziwa. Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, wanciphisa izindandatho zakhe zamabhulogi esayensi (iSayensi 2.0, iSayensi Codex, iScienceBlogs) evela ku-ACSH.org.
UHank Campbell kuze kube kuleli sonto umongameli we Umkhandlu WaseMelika Wezesayensi Nempilo (ACSH), iqembu elizibiza ngokuthi "liyinhlangano yokukhuthaza abathengi yabasosayensi" kepha lithola imali evela ezinkampanini ukwenza imikhankaso yokuvikela imikhiqizo, ngokusho kwe amadokhumende ezezimali angaphakathi idalulwe umama Jones e 2012. Ama-imeyili akhishwe ngokusebenzisa amacala enza lokho IMonsanto exhaswe yi-ACSH futhi wacela iqembu ukuthi libhale nge-glyphosate.
UCampbell uthathe ubuholi buka I-ACSH ngoJulayi 2015 kumongameli obambile uGil Ross, MD, a utholwe enecala owaboshelwa ukukhwabanisa kweMedicaid. Amarekhodi entela khombisa ukuthi uDkt Ross wayesabhaliswa yi-ACSH kusukela ngo-2017 enezinkulungwane ezingama- $ 111,618 enxephezelwa njengo "owayengumqondisi omkhulu wezokwelapha kanye nempilo yomphakathi," kanti uCampbell wathola ama- $ 224,358. Ngaphambi kokuhola i-ACSH, uCampbell wasebenza kwisoftware development, kudaliwe lokho akubizayo "ukunyakaza okudumile emhlabeni kweSayensi 2.0," futhi wabhala incwadi mayelana ne- "I-anti-science" isele. Usebenzisa izindandatho zamawebhusayithi wesayensi angabazekayo, kufaka phakathi lawo athumele izinto ezilwa namaSemite ukuthi uCampbell wazama ukuvikela.
Inethiwekhi kaCampbell yamabhulogi esayensi angenzi nzuzo, angenzi nzuzo
NYU UProfesa UCharles Seife uthumele amadokhumende ngoNovemba akhanyisela inethiwekhi yamabhulogi esayensi kaCampbell asiza ukukhuthaza i-American Council on Science and Health. Kumucu we-Twitter ubize “Ukwenza imephu nge-octopus ethanda iMonsanto,”USeife ubike:
Inkampani kaCampbell ION Publications LLC (eyasungulwa ngo-2008) iphethe amawebhusayithi amaningi wokubhuloga wesayensi, kufaka phakathi Isayensi 2.0, ICodex Yesayensi nabanye. Ngokusho kwamuva kakhulu amarekhodi entela, I-ACSH ikhokhele i-ION $ 60,000 njenge- "insizakalo yokuthuthukisa iwebhusayithi ekhuthaza i-ACSH.org futhi yande ithrafikhi kuwebhusayithi."
Ngo-2018, uCampbell waguqula iSayensi 2.0 ungene kokungenzi inzuzo bese etholwa IsayensiBlogs.com. Izikhulu ezingenzi-nzuzo nguCampbell noDavid Zaruk, a owayekade eyimboni yamakhemikhali owake wasebenzela inkampani yezobudlelwano nomphakathi iBurson-Marsteller. Amawebhusayithi wokubloga ezesayensi ngaphansi kwalezi zambulela ayaphambana-akhuthazana kanye newebhusayithi ye-ACSH.org.
USeife wafingqa owakhe Intambo ye-Twitter: “Nansi indlela isiza esasibabaza ngaso isayensi, @syabongampungos, itholwe yinethiwekhi eyinkimbinkimbi, kanye ne-IMO, engenanzuzo yenzuzo nengenzi nzuzo isiza iMonsanto. ”
Ngokuvumelana ne imibhalo ekhishwe ngecala, UMonsanto wakhokha i-American Council on Science and Health ngo-2015 ukuvikela i-glyphosate nokusiza bahlaze ososayensi wephaneli elicwaninga ngomdlavuza leWorld Health Organisation ngombiko wabo ophakamisa ukukhathazeka ngomdlavuza mayelana ne-herbicide.
Le mibhalo ikhombisa ukuthi abaphathi beMonsanto babengakhululeki ngokusebenzisana ne-ACSH kodwa bakwenza lokho ngoba “asinabo abalandeli abaningi futhi asikwazi ukulahlekelwa yilaba abambalwa esinabo,” kubhala uDaniel Goldstein, ohola phambili kwezesayensi eMonsanto i-imeyili kozakwethu. UGoldstein unikeze izixhumanisi ezincwadini ezimbili, iphamfulethi, ukubuyekezwa kwezibulala-zinambuzane kanye nama-athikili angama-53 kuwebhusayithi ye-ACSH.org akuchaze ngokuthi “LUSEBENZISA KAKHULU”(Kugcizelelwa uGoldstein's).
Izinto ezilwa namaSemite kwiSayensi 2.0
Abanye ababhali bangaphambili beScienceBlogs.com benqabile ukunikeza amalungelo ngomsebenzi wabo ukuhlala kule ndawo ngenxa yokuhlangana kwayo neCampbell neSayensi 2.0, kanye nezinye izingqapheli ucele ababhali ukuthi nabo benze okufanayo. Okudingidwa ukushicilelwa kweSayensi 2.0 kwezinto ezilwa namaSemite, okuyi UCampbell uzame ukuchaza nokuvikela.
Ephendula ukugxekwa, uCampbell ususe okunye okuthunyelwe ngusosayensi uSascha Vongehr, kufaka phakathi okukodwa okubizwa ngokuthi, "One Thing Hitler Did Wrong." I- isaziso sokususwa ichaza umsebenzi kaVongehr ngokuthi “ukubhuqa” okwaqala njengokucasula ngenxa yokuthi “umbhali wayengalubambi kahle ulimi lwesiNgisi.” Isayensi 2.0 iyaqhubeka nokukhombisa izindatshana eziningi nguVongehr, kufaka phakathi eminye equkethe imizwa eyahlukene yokulwa namaSemite, okufana neposi lapho uVongehr azichaza khona ngokuthi "ungumuntu obandlulula amaJalimane" futhi enye enesihloko esithi "Advanced Racism For Dr Duke And Prof Slattery: Why Hate Juda?"
Related: Isayensi 2.0 iyenqaba ukususa okuthunyelwe kwebhulogi lamaNazi eugenics, nguKeira Havens, Medium (7.9.2018)
Isebenzisa i-USA Today njengesitolo
NgoFebhuwari 2017, amaqembu ezempilo, ezemvelo, ezabasebenzi kanye nezintshisekelo zomphakathi ubhalele abahleli be-USA Today ngokukhathazeka ukuthi leli phepha lishicilela njalo amakholomu esayensi abhalwe ngabasebenzi be-ACSH, kufaka phakathi uCampbell, ngaphandle kokudalula uxhaso lwe-ACSH kusuka kuzintshisekelo eziningi zezinkampani. Iphini Likamongameli We-ACSH Wezindaba Zesayensi u-Alex Berezow, owabhala futhi incwadi kaCampbell yango-2012, uhlala kwi-USA Today Board of Contributors kodwa umlando wakhe lapho akuvezi okwakhe isikhundla sabasebenzi babaholi e-ACSH.
INewsweek ne-USA Namuhla Zidinga Amazinga Wababhali Bombono, nguStacy Malkan, Fairness and Accuracy in Reporting (2.2.2018)
Amaqembu Ezintshisekelo Zomphakathi aya e-USA Namuhla: Dump Corporate Front Group Columns Science, incwadi eya kubahleli (2.23.2017)
I-USA Namuhla Yehluleka: I-Trump Science Article Ebhalwe Yi-Corporate Front Group, nguStacy Malkan, Alternet (6.1.2016)
I-American Council on Science and Health iyiCorporate Front Group, Ishidi lamaqiniso le-USRTK
I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane ACSH, U-Alex Berezow, Umkhandlu waseMelika wezeMpilo neSayensi, UCharles Seife, UDaniel Goldstein, UDavid Zaruk, UGil Ross, glyphosate, Hank campbell, ION Publications LLC, Monsanto, Sascha Vongehr, Isayensi 2.0, ICodex Yesayensi, IsayensiAmabhulogi
I-American Council on Science and Health iyiCorporate Front Group
Posted on August 12, 2018 by UGary Ruskin
Kubuyekezwe ngoJulayi 2019
I-American Council on Science and Health (ACSH) kuzibiza "inhlangano yokukhuthaza abathengi abathengi besayensi" kanye nabezindaba bavame ukucaphuna iqembu njengomthombo ozimele wesayensi; kodwa-ke, imibhalo echazwe kuleli qiniso ibonisa ukuthi i-ACSH iyiqembu eliphambili lezinkampani elicela imali ezinkampanini zikagwayi, zamakhemikhali, zezimonyo, zemithi kanye nezinye ukuze zivikele futhi zithuthukise imikhiqizo yazo. Leli qembu alizidaluli izimali zalo.
Ama-imeyili avela ku-2015 akhishwe ngokutholakala aveza lokho IMonsanto exhaswe yi-ACSH futhi wacela iqembu ukuthi siza ukuvikela i-glyphosate.
Imibhalo yezimali eputshukile kusukela ngo-2012 kusungulwa ukuthi i-ACSH icela imali ezinkampanini ngemikhankaso yokuvikela umkhiqizo. Abanikeli bahlanganisa izinkampani eziningi ezahlukahlukene kanye namaqembu ezimboni.
Ama-imeyili asuka ku-2009 khombisa ukuthi i-ACSH icele ama- $ 100,000 kwaSyngenta ukuthi babhale iphepha futhi babhukhe ngomuthi wokubulala izinambuzane waseSyngenta. Ngo-2011, i-ACSH yakhipha i- incwadi kaJon Entine kufana nephrojekthi echazwe ku-imeyili.
ISyngenta neMonsanto bebelokhu benikela njalo ku-ACSH kule minyaka edlule, ama-imeyili akhombisa.
IMonsanto ixhasa i-ACSH ukuvikela imikhiqizo yeMonsanto
Ama-imeyili akhishwe ngo-Ephreli 2019 aveza lokho IMonsanto yavuma ukuxhasa i-ACSH ngo-2015 futhi ngacela iqembu ukuthi lisize ukuvikela i-glyphosate ekukhathazekeni komdlavuza okuphakanyiswe yi-International Agency for Research. I-ACSH ivumile ukwenza lokho, kwathi ngokuhamba kwesikhathi yahlasela lo mbiko womdlavuza ngokuthi “ukukhwabanisa kwesayensi. ” Ama-imeyili akhanyisa ukuthembela kwe-ACSH emalini yezinkampani kanye nemizamo yokujabulisa abaxhasi bayo. Owayengumphathi obambile we-ACSH uGil Ross (ngubani wachitha isikhathi ejele Ukukhwabanisa kweMedicaid) wabhalela isikhulu seMonsanto, "Usuku nosuku, sisebenza kanzima ukukhombisa ukubaluleka kwethu ezinkampanini ezinjengeMonsanto." URoss wabhala:
Ama-imeyili akhombisa lokho Abaphathi beMonsanto bakhokha i-ACSH yize bengaphathekile kahle eqenjini. Ohola phambili kwezesayensi kwaMonsanto uDaniel Goldstein waphokophela i-ACSH kozakwabo, futhi wabathumela izixhumanisi ezihlokweni ezingama-53 ze-ACSH, izincwadi ezimbili kanye nokubuyekezwa kwezibulala-zinambuzane akuchaze ngokuthi “KUSEBENZISA KAKHULU.” UGoldstein wabhala:
Isidlali esiyinhloko kunethiwekhi yenkulumo-ze kaMonsanto
Uphenyo oluthola imiklomelo olwenziwe nguLe Monde eMonsanto “impi nesayensi”Ukuvikela i-glyphosate eqanjwe i-American Council on Science and Health phakathi kwamawebhusayithi“ we-propaganda awaziwayo ”adlale indima enkulu ekuhlaseleni ososayensi abaphakamise ukukhathazeka ngomdlavuza. NgoMeyi 2017, abameli babamangali abamangalela uMonsanto mayelana nokukhathazeka ngomdlavuza we-glyphosate Kusho kafushane: “IMonsanto ifaka buthule imali 'yamathangi okucabanga' njenge 'Genetic Literacy Project' kanye 'ne-American Council on Science and Health,' izinhlangano ebezihlose ukuhlazisa ososayensi nokuqhakambisa imininingwane ewusizo eMonsanto nakwabanye abakhiqizi bamakhemikhali.”
Ama-imeyili atholwe yi-US Right to Know aveza ukuthi iMonsanto yaqala yakhetha i-ACSH ukuthi ishicilele uchungechunge lwamaphepha e-pro-GMO anikezwa osolwazi nguMonsanto futhi "athengiswa" yinkampani ye-PR ukuze ibakhuthaze kakhulu njengabazimele. Isikhulu seMonsanto u-Eric Sachs ubhalele osolwazi: “Ukuqinisekisa ukuthi amaphepha anomthelela omkhulu, i-American Council for Science and Health ibambisene neCMA Consulting ukuqhuba lo msebenzi. Izinqubomgomo zenqubomgomo ezigcwalisiwe zizonikezwa kuwebhusayithi ye-ACSH… i-CMA ne-ACSH nayo izothengisa ngezifinyezo zenqubomgomo, kufaka phakathi ukwakhiwa kwezinto ezithile zemidiya, ezinjenge-op-eds, ukuthunyelwa kwama-blog, izingxoxo zokuxoxa, imicimbi, ama-webinar, njll. ” I- ekugcineni amaphepha ashicilelwa by Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project ngaphandle kokudalulwa kwendima kaMonsanto.
Phakathi ku umbiko ovela eNdlu yabamele i-US, abaphenyi bebandla bathi iMonsanto isebenzisa “amaqembu ezentengiselwano, njengeCropLife namaqembu aphambili embonini, njengeGenetic Literacy Project kanye ne-Academics Review njengamapulatifomu okusekela abakhulumela imboni.”
Imibhalo ye-ACSH evuzayo iveza isu lezezimali lezokuvikela
U-2012 oputshukile Isifinyezo sezezimali se-ACSH ibikwe umama Jones uveze ukuthi i-ACSH ithole uxhaso kwinani elikhulu lezinkampani kanye namaqembu ezimboni anengxenye yezezimali ekuthumeleni imiyalezo i-ACSH ikhuthaza - futhi ikhombise ukuthi i-ACSH icela kanjani iminikelo yenkampani yemikhankaso yokuvikela umkhiqizo. Isibonelo, idokhumenti ichaza:
Izinhlelo zokufaka iVinyl Institute “ngaphambili eyayisekela umbiko we-chlorine nowezempilo”
Izinhlelo zokufaka izinkampani zokudla ngomkhankaso wemiyalezo wokuphikisana nokulebula kwe-GMO
Izinhlelo zokufaka izinkampani zezimonyo ukulwa "nengcindezi yokuguqula kabusha" eMkhankasweni Wezokuphepha Eziphephile
Imizamo yenkantolo yezinkampani zikagwayi neze-e-cigaret
UMama Jones ubike ukuthi, "Abanikeli be-ACSH kanye nalabo abangabaxhasa iqembu bekulokhu kubhekiswe kubo ukuthi ngubani-ngubani wezamandla, ezolimo, izimonyo, ukudla, i-soda, amakhemikhali, amakhemikhali, kanye nezinkampani zikagwayi." Imininingwane yezimali:
Abaxhasi be-ACSH engxenyeni yesibili yonyaka ka-2012 bahlanganisa i-DRM, Coca-Cola, iBristol Myers Squibb Foundation, uDkt Pepper / Snapple, Bayer Cropscience, Procter noGamble, Syngenta, 3M, McDonald's, kanye ne-coconferate e-Altria. I-ACSH iphinde yafuna ukwesekwa kwezezimali yiPepsi, Monsanto, British American Tobacco, DowAgro, ExxonMobil Foundation, Philip Morris International, Reynolds American, i-Koch elawulwa ngumndeni uClaude R. Lambe Foundation, i-Dow-linked Gerstacker Foundation, iBradley Foundation neSearle Freedom Ukwethemba.
UReynolds American noPhillip Morris International yibona ababengabanikeli abakhulu kunabo bonke ababalulwe kule mibhalo.
Ukuxhaswa kweSyngenta, ukuzivikela kweSyngenta
Ngo-2011, i-ACSH yashicilela incwadi ekhuluma nge “chemophobia” eyabhalwa nguJon Entine, manje ongumqondisi omkhulu we IGenetic Literacy Project, elinye iqembu eliphambili lokho kusebenza neMonsanto. Incwadi ka-Entine's ACSH ivikele i-atrazine, isibulala-zinambuzane esenziwe yiSyngenta, ebixhasa i-ACSH.
A 2012 Isihloko sikaMama Jones ichaza izimo eziholela encwadini. Ichazwa indatshana kaTom Philpott, esekwe ngokwengxenye emibhalweni yenkampani yangaphakathi etholwe yiCentre for Media and Democracy Imizamo kaSyngenta PR ukuthola ababambisene nabo abavela eceleni ukusakaza izindaba zabezindaba we-atrazine.
Ngesinye imeyili kusuka ngo-2009, Abasebenzi be-ACSH bacele iSyngenta imali eyengeziwe engu- $ 100,000 - “ehlukile futhi ehlukile kunokwesekwa kokusebenza okujwayelekile iSyngenta ibilokhu inikela ngokukhululeka eminyakeni edlule” - ukukhiqiza iphepha elilungele i-atrazine kanye ne "ncwajana elungele abathengi" ukusiza ukufundisa abezindaba nososayensi.
I-imeyili evela emsebenzini ka-ASCH uGil Ross eya eSyngenta mayelana nephrojekthi ye-atrazine ehlongozwayo:
Ngemuva konyaka nohhafu, i-ACSH yashicilela incwadi ka-Entine ngokukhishwa kwabezindaba lokho kuzwakala kufana nephrojekthi uRoss echazwe kweyakhe ukucela i-imeyili eSyngenta: “UMkhandlu WaseMelika Wezesayensi Nezempilo uyajabula ukumemezela incwadi entsha nomngane wephepha lokuma elinobungane, elifushanisiwe” ngokuphendula “ukwesaba okungenangqondo kwamakhemikhali.” Umbhali uJon Entine ubuphikile ubudlelwano bakhe noSyngenta futhi watshela uPhilpott ukuthi “akazi” ukuthi uSyngenta uxhasa i-ACSH.
Isikhathi eside se-ACSH “UMqondisi Wezokwelapha / Ophethe" UDkt Gilbert Ross utholwe enecala lokuqola uhlelo lweMedicaid ngaphambi kokujoyina i-ACSH. Bona imibhalo yasenkantolo mayelana nokuningi kukaDkt. Ross ukulahlwa ngamacala okukhwabanisa futhi ukugwetshwa, nendatshana kuMama Jones “Kufaka uDkt Ross”(2005). UDkt. Ross watholakala "engumuntu ongathembeki kakhulu" yijaji elasekela ukukhishwa kukaDkt Ross eMedicaid iminyaka eyishumi (bheka okungeziwe izinkomba futhi umbhalo wenkantolo).
Ngo-Juni 2015, Hank campbell uthathe ubuholi be-ACSH kusuka esebenza Umongameli (futhi owalahlwa yicala) UDkt Gilbert Ross. UCampbell usebenzile izinkampani ezithuthukisa ama-software ngaphambi kokuqala iwebhusayithi iScience 2.0 ngo-2006. Ngo incwadi yakhe yango-2012 no-Alex Berezow, "Isayensi Ishiywe Ngemuva: Zizwa Amanga Ahle kanye Nokuphakama Kwesobunxele Kwesayensi," uCampbell uchaza imvelaphi yakhe: "eminyakeni eyisithupha eyedlule… nginqume ukuthi ngifuna ukubhala isayensi kwi-Intanethi ... ngaphandle kwentshiseko nomqondo, ngaya emhlabeni abantu abadumile ngokungisiza ngakhe kabusha indlela isayensi engenziwa ngayo, futhi bakwenza mahhala. ” UCampbell uhambe ngokuzumayo ngaphansi kwezimo ezingaziwa ngoDisemba 2018. Funda kabanzi mayelana neCampbell lapha.
Umbhali wencwadi kaCampbell, U-Alex Berezow, manje usekela mongameli wezindaba zesayensi e-ACSH. Ungumhleli wokusungula weReal Clear Science futhi usebhodini labahleli be-USA Today kodwa yi-USA Today ayikudaluli ukuhlangana kwe-ACSH neBerezow noma uxhaso lwezinkampani lwe-ACSH yize kunezikhalazo eziphindaphindwayo (imininingwane eminingi ngezansi).
Abaholi nabeluleki: izibopho zikagwayi nokwenqatshelwa kwesayensi yezulu
I-ACSH ibhodi labaphatheli kuhlanganisa UFred L. Smith Jr., umsunguli we-Competitive Enterprises Institute, ohola phambili umgqugquzeli wokwenqatshelwa kwesayensi yezulu neqembu eline ithole izigidi zamaRandi kusuka ku-Exxon Mobile kanye imoto yokuxhasa ngemali emnyama Abaxhasi Trust. USmith no-CEI futhi banomlando wokulwa nemithetho kagwayi nokucela imali embonini kagwayi, ngokusho kwemibhalo evela ku Ingobo yomlando ye-UCSF yeQiniso leMboni kaGwayi.
UJames Enstrom futhi UGeoffrey Kabat, odokotela bezifo ezimbili abathathe imali ezinkampanini zikagwayi babhala izifundo bavikela imikhiqizo kagwayi, nabo banobudlelwano be-ACSH. UDkt Enstrom uyilungu le-ACSH ibhodi labaphatheli futhi uDkt. Kabat usebenzaibhodi lezempilo labeluleki besayensi“. Bobabili ososayensi “banezixhumano ezinde zezezimali nobunye bokusebenzisana nomkhakha kagwayi,” ngokusho kuka- iphepha ku-BMJ Tobacco Control.
Ngo-2003 ocashunwe kabanzi iphepha kwaBMJ, Kabat nase-Enstrom baphethe ngokuthi intuthu kagwayi ayikhuphuli ingozi yomdlavuza wamaphaphu nesifo senhliziyo. Ucwaningo beluxhaswe ngokwengxenye yiCentre for Indoor Air Research (CIAR), okuyiqembu lomkhakha kagwayi. Yize leyo mali yadalulwa, kwalandelwa ukuhlaziywa ku-BMJ Tobacco Control kutholakale ukuthi ukudalulwa ngu-Enstrom noKabat “akuzange kunikeze umfundi isithombe esigcwele sokubandakanyeka kwemboni kagwayi nababhali bezocwaningo.” Leli phepha lichaza izibopho eziningi zezezimali phakathi kwe-Enstrom nemboni kagwayi.
I-Enstrom iziphikisile lezi zimangalo ku- I-athikili ka-2007 ku-Epidemiological Perspectives and Innovation, ephikisa ngokuthi ukuxhaswa kwakhe nezintshisekelo ezincintisanayo kuchazwe ngokusobala nangendlela efanele ephepheni leBMJ lango-2003, nokuthi imali yezimboni zikagwayi ayizange ibe nomthelela ocwaningweni lwakhe. "Kuze kube manje, akukho okungahambi ngendlela, ukwenzelela noma ukungenzi okuthile okutholakele ohlelweni lokubuyekeza futhi akukho phutha emiphumeleni ekhonjwe ephepheni," kusho u-Enstrom.
Ama-imeyili avela ku-2014 afaka uDkt Enstrom ekhuluma nomphiki odumile wesayensi yezulu uFred Singer imibono yoku ukuhlasela nokudicilela phansi ososayensi ababili ababebambe iqhaza kule filimu “Abathengisi Bokungabaza: Indlela Ososayensi Abambalwa Abalitholile Ngayo Iqiniso Ezindabeni Ezisuka Emoyeni Wogwayi Kuya Ekushiseni Komhlaba Wonke, ”Nokuthi uzama yini ukumisa ukukhishwa kwefilimu ngecala. Ngeminye imininingwane, bona ibhulogi yakwaDeSmog, “Isibhamu Sikagwayi Sokuqasha UJames Enstrom, uWillie Ngokushesha kanye Nabahlaseli Besimo Sezulu Bahlasela Abathengisi Bokungabaza”(Mashi 2015).
UDkt Kabat futhi usebhodini labaqondisi lenhlangano yabazali ye- I-Genetic Literacy Project, iqembu eliphambili esebenza neMonsanto kumaphrojekthi we-PR ngenkathi ithi izimele. Funda kabanzi ngomsebenzi wakhe ekhasini lethu lamaqiniso, Izibopho zikaGeoffrey Kabat kumaQembu Wezimboni Zikagwayi Namakhemikhali
Izitatimende ezingalungile ngesayensi
UMkhandlu WaseMelika Wezesayensi Nezempilo ubanga ukuthi:
"Abukho ubufakazi bokuthi ukuhogela intuthu kagwayi kuhlanganisa ukuhlaselwa yinhliziyo noma ukuboshwa kwenhliziyo." Ijenali kaWinston-Salem, 2012
“Akukho ukuvumelana okungokwesayensi mayelana nokufudumala kwembulunga yonke.” ACSH, 1998 (IGreenpeace ine kuchazwe i-ACSH iqembu lokuqala "lokuphika isimo sezulu seKoch Industries")
ukuthwebula “akungcolisi amanzi noma umoya.” Umshayeli wansuku zonke, 2013
"Akukaze kube nezehlakalo zokugula ezihlobene nokusetshenziswa nokulawulwa kwemithi yokubulala izinambuzane kuleli." Umtapo Wezincwadi Zikagwayi, i-UCSF, Intuthuko Yokubumbana Kwesayensi Yomsindo ikhasi lombhalo 9, 1995
"Abukho ubufakazi bokuthi i-BPA [bisphenol A] emikhiqizweni yanoma yiluphi uhlobo, okubandakanya amarisidi erejista yemali, iyingozi empilweni." ACSH, 2012
ukuchayeka kwi-mercury, i-neurotoxin enamandla, “ekudleni kwasolwandle okuvamile akulimazi abantu.” ACSH, 2010.
Imiyalezo yakamuva ye-ACSH iyaqhubeka esihlokweni esifanayo, iphika ubungozi obuvela emikhiqizweni ebalulekile kumakhemikhali, ugwayi nezinye izimboni, nokwenza ukuhlaselwa kaningi kososayensi, izintatheli nabanye abaphakamisa ukukhathazeka.
I-2016 "top junk science" iposi nge-ACSH iyaphika ukuthi amakhemikhali angadala ukuphazamiseka kwe-endocrine; ivikela i-e-cigarettes, vaping ne-soda; futhi ihlasela izintatheli kanye neJenali ye-American Medical Association.
I-USA Namuhla inika i-ACSH ipulatifomu
I-USA Today iyaqhubeka nokushicilela amakholomu ngabasebenzi be-ACSH uHank Campbell no-Alex Berezow ngaphandle kokudalula izibopho zabo zokuxhasa ngezimali ezinkampanini ezivikela izintshisekelo zazo. NgoFebhuwari 2017, Amaqembu ezempilo, ezemvelo, ezabasebenzi kanye nezintshisekelo zomphakathi ezingama-30 ubhalele abahleli be-USA Today ecela leli phepha ukuthi liyeke ukunikeza i-ACSH iplatifomu esemthethweni noma okungenani linikeze ukudalulwa okugcwele mayelana nokuthi ngubani oxhasa iqembu.
“Sibhala sizwakalisa ukukhathazeka kwethu ngokuthi i-USA Today iyaqhubeka nokushicilela amakholomu abhalwe ngamalungu e-American Council on Science and Health (ACSH), okuyiqembu elixhaswe ngezinkampani elinomlando omude wokukhuthaza ama-ajenda ezinkampani aphikisana nesayensi enkulu . I-USA Today akufanele isize leli qembu liphakamise ubunikazi balo obungamanga njengomthombo othembekile, nozimele kusayensi. Abafundi bakho bafanelwe ulwazi olunembile mayelana nokuthi leli qembu limele ini nokuthi ngubani, njengoba becabanga ngokuqukethwe yikholomu. ”
“Lezi akuzona izinsolo ezingenamsebenzi. Amaqembu amaningi asayinwe ngaphansi kwezempilo, ezemvelo, ezabasebenzi kanye nezintshisekelo zomphakathi abelandela umsebenzi we-ACSH eminyakeni edlule. Sizibhale phansi izimo lapho iqembu lisebenze khona dicilela phansi isayensi yokushintsha kwesimo sezulu, nokuphika izinsongo zezempilo ezihambisana nemikhiqizo ehlukahlukene, kufaka phakathi intuthu kagwayi, ukukhwabanisa, izibulala-zinambuzane futhi industrial Amakhemikhali - konke ngaphandle kokucaca mayelana nabaxhasi bayo bezinkampani. ”
Siyakuqaphela lokho zezimali amadokhumenti okutholwe nguMama Jones kukhombisa ukuthi i-ACSH ithole uxhaso ezinkampanini zikagwayi, zamakhemikhali, zemithi nezikawoyela. Amaqembu anentshisekelo yomphakathi anakho kubika ukuthi i-ACSH ithole uxhaso kwiKoch Foundations phakathi kuka-2005-2011, futhi yakhululwa imibhalo yangaphakathi okukhombisa ukuthi i-ACSH yacela ama- $ 100,000 kwaSyngenta ngo-2009 ukuthi ibhale kahle ngomkhiqizo wayo i-atrazine - umnikelo owawuzobekwa “uhlukane futhi uhluke ekusekelweni okujwayelekile kokusebenza kweSyngenta bekulokhu kunikelwa ngokukhululeka eminyakeni edlule.”
“Ngesikhathi lapho umphakathi ungabaza ukuba semthethweni kwemithombo yezindaba, sikholwa ukuthi kubalulekile ukuthi izincwadi ezifana ne-USA Today zilandele imigomo ephakeme kakhulu yokuziphatha kwezintatheli futhi zisebenzele umphakathi ngeqiniso elikhulu nangokusobala ngangokunokwenzeka. Sikucela ngenhlonipho ukuthi uyeke ukushicilela ezinye izinhlu ezibhalwe amalungu e-American Council on Science and Health, noma okungenani zidinga ukuthi abantu babone le nhlangano ngokunembile njengeqembu elixhasa ngezimali lenkampani. ”
Kusukela ngoDisemba 2017, umhleli wekhasi labahleli be-USA Today uBill Sternberg wenqabile ukumisa ukushicilela amakholomu e-ACSH kanti nephepha selinikezele kaninginingi ukudalulwa okunganembile noma okungaphelele kwamakholomu, futhi wehluleka ukwazisa abafundi bawo ngezimali ze-ACSH ezivela ezinkampanini ezikhuthaza uhlelo lwazo.
Ukudla Okucatshangwayo, IHholo Lamahloni, Uphenyo lwethu 3M, ACSH, U-Alex Berezow, Altria, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, I-American Enterprise Institute, I-Bayer CropScience, UBill Sternberg, Isisekelo seBradley, Isisekelo seBristol Myers Squibb, Ugwayi waseMelika waseBrithani, I-Chemophobia, I-Chevron, UClaude R. Lambe Foundation, Ukubonisana kweCMA, Coca-Cola, I-DowAgroSciences, UDkt Gil Ross, UDkt Pepper / Snapple, U-Elizabeth Whelan, U-Eric Sachs, Isisekelo se-ExxonMobil, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, UGeoffrey Kabat, Isisekelo seGerstacker, UGil Ross, Hank campbell, UJames Enstrom, UJon Entine, McDonalds, Monsanto, Pepsi, UFiliphu Morris International, I-Procter & Gamble, UReynolds waseMelika, Isayensi 2.0, ISearle Freedom Trust, Syngenta, USA Today